တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ ပုံမှန်လား သိချင်နေတဲ့ သီဟ | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ ပုံမှန်လား သိချင်နေတဲ့ သီဟ
အပြာကားတွေ ကြည့်ပြီး တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာ ပုံမှန်လား သိချင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သီဟရဲ့ အတွေ့အကြုံ
ကျွန်တော် နာမည်ကတော့ သီဟပါ။ အသက်ကတော့ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးပြီဗျ။ ကျွန်တော်က ခုလောလောဆယ် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာ ဘူမိဗေဒအထူးပြုနဲ့ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားပါ။ မိသားစုမှာတော့ ကျွန်တော်က အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်ထက် ၆ နှစ်ကြီးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဒီထက်ပိုပြီး ပြောရရင် ကျွန်တော်က လွတ်လွတ်လပ်လပ်သမား၊ မိဘတွေရဲ့ ဘာဖြစ်ရမယ် ညာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ချမှတ်ထားတဲ့ ဘောင်ထဲမှာ မနေချင်တဲ့လူမျိုး၊ ဒါကြောင့်မို့လို ဆယ်ကျော်သက် မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်မှာ မိဘတွေနဲ့ သိပ်ပြီး သဟဇာတ မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။
ဟိုမရောက် ဒီမရောက်အရွယ်ဆိုတော့ သွေးကဆူ၊ ဟိုဟာ စမ်းချင် ဒီဟာ စမ်းချင်တွေ ဖြစ်ပြီး အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဟေးလား ဝါးလား လုပ်တော့တာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်တုန်းကဆို ကျွန်တော်က ကျောင်းလေး တက်လိုက်၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူ ဘားထိုင်လိုက်၊ တခါတလေ ကျောင်းလစ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး မိန်းကလေးတွေ အကြောင်း၊ အပြာကားထဲက မင်းသမီးတွေအကြောင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောကြတာပေါ့။ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ Covid – 19 ကြောင့် စက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတေွ နား၊ တက္ကသိုလ်တွေလဲ ပိတ် ဖြစ်ကုန်တဲ့အပြင် ဟိုနား ဒီနားလဲ သွားလို့မရဘဲ အိမ်တွင်းပဲ အောင်းနေရတာ အားလုံးလဲ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးလေ။ အိမ်မှာနေ စားလိုက် သောက်လိုက်၊ အင်တာနက်သုံးလိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စာအုပ်ဖတ် လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါ့အပြင် တခါတလေ သွေးသားဆန္ဒအရ ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ သိတယ်မလား? အပြာကားတေွ ကြည့်ပြီး အာသာဖြေတာမျိုးတွေလဲ ရှိတာပေါ့။ အိမ်မှာ လုပ်စရာမရှိ အားနေတယ်ဆိုတော့လဲ မရှက်တမ်း ဝန်ခံရရင် တချို့ရက်တွေမှာ အနည်းဆုံး ၄ခါ အများဆုံး ၆ ခေါက်လောက်တော့ လုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ သွေးသားတက်ကြွတဲ့အရွယ်ကြောင့် မို့လို့လား မသိ၊ ဒီလို အပြာကားတွေ၊ အပြာစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးရင် လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ၊ တခါတလေကျရင် ဒီလို အပြာဇာတ်လမ်းတွေထဲက ဟာတွေက တကယ့်လက်တွေ့နဲ့ ရော တူတူပဲလားဆိုပြီး သိချင်တဲ့ စိတ်တွေလဲ ဖြစ်လာတာပေါ့။
ကြာလာတော့ ဒီလို မကြာခဏ အာသာဖြေတာမျိုးတွေ လုပ်နေတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ရော ညီညွတ်ရဲ့လား? ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ထန်လွန်းပြီး အလွန်အကြူးများ ဖြစ်နေပြီလား? ဆိုတာ ကျွန်တော်စိုးရိမ်လာမိတယ်ဗျာ… နောက်ပြီး ကျွန်တော် သတိရမိတာတစ်ခုက ဝါရင့်တဲ့ ဘီးကျဲကြီးတွေက နောက်ပြောပြောနေကြ စကားတွေလေ! ဘာတဲ့? အာသာဖြေတာများလွန်းရင် အမြုံဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလား? တကယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကျိုးနည်းရချည်ရဲ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ကြံရာမရဖြစ်နေတုန်း ကျွန်တော်ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ Wall ပေါ်မှာ Share ထားတဲ့ သိလိုရာမေး က “လက်သမားလေးတို့ သိစေဖို့” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခု သွားတွေ့ပါလေရော။ ဖတ်ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော်အဖြစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အပြင် ဒီလိုမျိုး အာသာဖြေတာက သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ခုဆိုရင် ကျွန်တော်က မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အသိပညာပေး လိင်ဆောင်ပါးတွေကို သိလိုရာမေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် သူငယ်ချင်းယောကျာ်းလေးတွေကိုလဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတိုးစေဖို့ သိလိုရာမေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က ဆောင်းပါးတွေကို လေ့လာဖို့ ပြောဖြစ်သလို မကြာခင်မှာ လက်ထပ်တော့မယ့် ကျွန်တော် အစ်မကိုလဲ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်မရအောင် သားဆက်ခြားတာတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ သိလိုရာမေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ လေ့လာနိုင်အောင်လို့လဲ လမ်းညွှန်ထားသေးတယ်။
ဒီတော့ ဘော်ဒါတွေထဲမှာလဲ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာရှိရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေကို လေ့လာချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ သိလိုရာမေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ လေ့လာလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီနေရာကနေ သတင်းကောင်းပါးချင်ပါတယ်။